Agasimihii Tvga Konfur Galbeed ee Muqdisho o Xil lo magcaabay – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Agasimihii Tvga Konfur Galbeed ee Muqdisho o Xil lo magcaabay
Sii-hayaha Ra’iisul wasaraha ahna Raiisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xilka ka qaaday xoghayihii joogtada ee xafiiska ra’iisul wasaaraha Cabdirasaaq Xuseen Aadan, toddobaad un kadib markii uu xilka u magacaabay.
Cabdirasaaq Xuseen Aadan ayaa waxaa lagu bedelay Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim oo horey u ahaa ku-xigeenka xoghayaha joogtada, isla markaana ahaan jirey Agaasimihii TV-ga DOWLAD GOBOLEEDKA KOONFUR GALBEED ay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Qoraal kooban oo uu soo dhigay boggiisa twitter-ka ayuu Mahdi Guuleed ku yiri “Waxaan Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim u magacaabay in si KMG ah uu u haayo xilkaxoghayaha Joogtada ah ee Xafiiska R/wasaaraha. Waxuu bedelayaa Cabdirisaaq Xuseen Aadan oo si KMG ah horay ugu hayay xilkaan.”
Previous Sii hayaha xilka ra’iisul wasaaraha Mahdi Guuleed oo xil ka qaadis iyo magacaabis sameeyay.
Next Dab xoogan oo ka kacay guryo ku dhex yaalo wasaaradi hore ee caafimaadka degmada Bondheere